ကျန်းမာရေအတွက်သာမကဘဲ အလှအပအတွက်ပါ အသုံးဝင်တဲ့ စတော်ဘယ်ရီဖျော်ရည် | OnDoctor
By OnDoctor Editor	 On May 13, 2019
ကဲ နွေရာသီမှာ လွယ်လွယ်ကူကူဝယ်လို့ရတဲ့ စတော်ဘယ်ရီသီးလေးတွေ အကြောင်း..
ကျွန်မကနေ့တိုင်း အသားရည်အတွက် အသီးအနှံအစစ်တွေကို ကြိတ်ပြီး smoothie လုပ်သောက်တတ်ပါတယ်ရှင်။ ခုလဲ နွေရာသီမှာ လွယ်လွယ်ကူကူ ဝယ်လို့ရတဲ့ စတော်ဘယ်ရီ လေးတွေ မတုံးခင် Smoothie လုပ်သောက်တုန်း အရမ်းခင်ရတဲ့ ညီမလေးတစ်ယောက် အလည်လာတာနဲ့ ကြုံတော့..
-“အမက facebook my story တွေမှာ အမြဲ အမသောက်တဲ့ smoothie bowl လေးတွေ share ထားတာတွေ့ပြီး သောက်ချင်နေတာ။ ခုတော့ ကြုံတုန်း မေးချင်တာတွေရော မြည်းချင်တာရောနဲ့ အတော်ပဲ..”
-“အမ တော်တော်သောက်ကောင်းတယ် ဘာတွေထည့်ဖျော်ထားတာတုန်း။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ ဖျော်ရည်ကို ဒီလိုအရသာရှိအောင် ဖျော်လို့ရမှန်းသိရင် တခြားအချိုရည်တွေ နို့ဆီသကြားတွေနဲ့ strawberry ကို ဘာလို့အဝခံသောက်တော့ မှာတုန်းလို့.. ဖျော်နည်း Recipe ပြောပြဦး..ကြိုက်တယ် အရမ်း..”
-“ဟုတ်တယ် ညီမလေးရေ ရာသီစာ strawberry တွေ မတုံးခင်လေး အဝသောက်တာ ညီမလေး.ဟီး..ပြီးတော့ ဖျော်နည်းကလည်း လွယ်လွယ်လေး..
Strawberry ( ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ ပမာန)
အဆီအချိုမပါတဲ့ ဒိန်ချဉ် တစ်ခွက်
ငှက်ပျောသီး သီးမွှေး တစ်လုံး
ဒါပဲလိုတာ..အမ smoothie က တခြားနို့ဆီတွေ သကြားတွေ ရေ ရေခဲ လုံးဝမပါဘူး.. ဒီတိုင်းသောက်လဲရသလို instagram မှာခေတ်စားနေသလို အပေါ်မှာ အသီးတွေ nuts တွေ Oats တွေ ထည့်ပြီး smoothie bowl လုပ်စားလဲ ရတယ်ရော..မနက်စာကို တခြား heavy တွေ စားမဲ့အစား ဝိတ်လျှော့နေတဲ့ အချိန် ဒါမျိုးစားရင် ကိုယ်ခန္ဓာလည်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြစ်တယ် စိတ်လည်းကြည်တယ်..နောက်အမက ပိုတဲ့ smoothie ကို မျက်နှာနဲ့ လည်ပင်းမှာ လိမ်းလိုက်တယ်လေ တခြားဓာတုပစ္စည်းတွေမပါလို့ စိတ်ချလက်ချ mask အနေနဲ့ ပေါင်းတင်လို့ရတာပေါ့..တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်ပဲ..ဟီး”
-“မျက်နှာပါလိမ်းတယ်!!!???? အဲ့လိုရတယ်ပေါ့..မိုက်တယ်..အဲ့ဆို ဒီstrawberry smoothie က ဘာအတွက်ကောင်းတာလဲ အမ??”
-” ပထမဆုံးအနေနဲ့က strawberry..သူက သံပုရာသီးထက်တောင် vitamin C ၃ ဆ ပိုမိုပါဝင်တာကြောင့် ကိုယ်ခံစွမ်းအားမြှင့်ပေးတယ်။ အသားရည်ကြည်လင်စေတယ်..နောက် ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်တဲ့ သတ္တိရှိလို့ အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းတာကို ကာကွယ်ပေးတယ်လေ..နောက်နေရောင်ခြည်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အမည်းစက်တွေကို သက်သာစေပြီး အသားရည် tone ကို lighten ဖြစ်စေတယ်..
နောက် strawberry မှာပါတဲ့ folic acid က မိန်းကလေးတွေအတွက် အရမ်းလိုအပ်တယ်လေ..ဆဲလ်တွေ ပွားတာကို လုပ်ပေးပြီး ပျက်စီးသွားတဲ့ ဆဲလ်တွေကို မြန်မြန်ပြန်ထုတ်ပေးတဲ့နေရာမှာ ကူညီပေးတယ်..
ဒိန်ချဉ်ကတော့ ဝမ်းမှန်စေတယ် အူမှာရှိတဲ့ ကောင်းတဲ့ လူကိုအကျိုးပြုတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေပါဝင်လို့ ဝမ်းမှန်ပြီး အပူပုပ်ကင်းစေတယ်..
ပျားရည်ကတော့ အသားရည် အစိုဓာတ်ထိန်းပေးပြီး ဝက်ခြံတွေကို သက်သာစေတယ် ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း အရမ်းကောင်းတယ်လေ..အချိုချင်းတူတူ သကြားတွေ နို့ဆီတွေအစား ပျားရည်ကိုသုံးတော့ ကျန်းမာရေးအတွက် ပိုကောင်းတာပေါ့..
နောက်ဆုံး အနေနဲ့က ပဲနို့ နွားနို့အစား ပဲနို့သုံးတာက ပဲပိစပ်မှာပါတဲ့ phyto oestrogen ကြောင့်လေ..မိန်းကလေးတွေအတွက် အသားရည်လှပစေဖို့ စိုပြေတင်းရင်းစေဖို့ oestrogen က မရှိမဖြစ်အရေးပါပြန်ရော..အဲ့ဒါကြောင့် ပဲနို့ကို နို့အစားသုံးတာလေ..
သဘာဝ ပစ္စည်းတွေပဲ ပါတော့ မျက်နှာမှာ mask အနေနဲ့ လိမ်းပြီး ပေါင်းတင်ဖို့ဆိုလည်း စိတ်ချရတာပေါ့..”
-“ဟယ် မိုက်လိုက်တာအမရယ်..အဲ့လောက် အကျိုးများတာနော့်..တော်ပြီ သမီးလဲ ခုကစပြီး strawberry မတုံးခင် အမလိုပဲ လုပ်သောက်တော့မယ် ခုတော့ အမဆီကပဲ ကြိတ်သွားလိုက်ဦးမယ်နော်..ဟီး”
-“ဟုတ်ပါပြီရှင် သောက်သွား သောက်သွား..Eating healthy can be fun ပါလို့ အမပြောသားပဲ”
ဒီလိုနဲ့ပဲ ကိုယ်သောက်မဲ့ဟာလေး သူ့ပဲတိုက်လိုက်ရတော့တာပေါ့..